ASP RSS Parser, Akhristaha Quudinta | Martech Zone
ASP RSS Parser, Akhristaha Feed
Isniin, Disembar 26, 2005 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku bilaabay qorista qoraalkayga gaarka ah ee ASP anigoo adeegsanaya shayga MSXML. Waxaan awooday inaan kuurgalo qiyaastii 75% ee RSS quudinta tan sameysa, laakiin qaar ka mid ah qeexitaannada dabacsan ee XML ee RSS quudinta ayaa cadeeyay inay aad u adagtahay barnaamijka. Waxaad ku arki kartaa ficil ahaan halkan. Waad ka gudbi kartaa tirada ugu badan ee walxaha (ni), tirada jilayaasha laga jaray erayga (nc), iyo sidoo kale URL-ka. Waxa kale oo aad ku arki kartaa quudinta dhabta ah oo leh aalado wax lagu beddelo halkan.
Inbadan oo RSS ah ayaa runtii 'wasakh ah' waxayna u baahan tahay in la fekero qoraalka feylka XML oo leh koodh khaldan xarig (ugh!) Dabcan, wali waxaan kujirnaa RSS 'dhalinyaradeena' shabaqa sidaa darteed layaabi maayo. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan faahfaahinta RSS halkan.
Ugu dambeyntiina, waxaan la kulmay jawharad yar. Waxaan helay fasal ASP oo bilaash ah oo aan ku soo dejisto. Waa waxyar oo gaabis ah, laakiin ma aanan helin quudin ay awoodi kari weyday inay akhrisato. Waxaan halkaan ku heystaa nooc istiraatiiji ah iyo nooc firfircoon halkan.
Lamaane ayaa ku qoraya qoraalka. Waxaan ubaahanahay inaan cadeeyo qaar kamid ah astaamaha HTML ee sharaxaada lasoo celiyay. Waxaan ku sameeyay hawl yar oo nadiifin ah waxaan helay:
Function saar HTML (strText) Dim nPos1 Dim nPos2 nPos1 = InStr (strText, ">") Samee Inta nPos1> 0 nPos2 = InStr (nPos1 + 1, strText, ">") Haddii nPos2> 0 Kadibna strText = Bidix (strT1 n, - 1) & Mid:
Waxaan sidoo kale ku daray wax yar oo sir ah: Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaan rabo inaan muujiyo wax ka yar ama ka yar sharraxaadda. Si kastaba ha noqotee, haddii aan si fudud u xaddido tirada astaamaha, markaa waan jari karaa sharraxaadda bartamaha erayga. Ma doonayo inaan taas sameeyo!
Waxqabadka Cutoff (strText, intChars) dim intLength dim j intLength = len (strText) haddii intChars> intLength ka dib j = intChars ilaa 0 tallaabo -1 haddii bartamaha (strText, j, 1) = "" ka dibna u bax xiga haddii j> 0 markaa strText = bidix (strText, j-1) & "..." kale strText = dhammaadka strText haddii dhammaado haddii Cutoff = StrText End Function
(Dhibaatooyin ayaan kala kulmay inaan si sax ah ugu muujiyo lambarkayga qormadan… ii soo sheeg haddii aad dhibaatooyin ku qabtid mid ka mid ah shaqooyinkaas!)
Waxaan ka dareemay xoogaa qalab ka badan shabaqa sidoo kale. Waxaa jira a
Gabagabadii, Waxaan rajaynayaa in qeexitaanada RSS ay sii wadaan in la sifeeyo oo quudinta dhabta ahi ay waafajiso heerarka XML dhammaan kiisaska. Codsiyada bilaashka ah sida TypePad, WordPress, iwm waxay u baahan yihiin inay sifeeyaan shaqadooda RSS. Bogag dheeri ah sida MySpace, Xanga, LiveJournal, iwm waxay u baahan yihiin inay horumariyaan shaqadooda RSS. RSS waa awood…Chris Baggott ku qoray gabal fiican Emailka iyo RSS. Waxaan u maleynayaa in isku darka shaqadooda ay kordhin karto saameynta labadaba!
Tags: aspdhejiyeRSSfalanqaynta rss